**** စွဲနေပြီ **** ( စ/ဆုံး )
HomeBooks**** စွဲနေပြီ **** ( စ/ဆုံး )
မိုးက အရမ်းသဲသဲမဲမဲ ရွာနေသည် .. ။ လေရောမိုးေ၇ာ သည်းထန်နေသည် ..။ အိမ်မှာ စနိုး တယောက်ထဲ ..။ အမေက..ဒီ
နေ့,အလုပ်ပိတ်ရက်မို့ .. အန်တီဒေါ်လီတို့အိမ်ကို သွားသည် . .။ အကြီးမ မိုနာ က ဒီနေ့ .. အလုပ်သွားသည် . .။ အိပ်ရာထဲ စောင်ခြုံကာ ကွေးနေမိသည် . .။ ကျောင်းက အတန်းဖေါ်သူငယ်ချင်း မီရှယ်လ် ဆီက ငှားလာတဲ့ ဒီဗွီဒီ ကို သတိရပြီး စက်ထဲထိုးထည့်ပြီး ကြည့်လိုက်သည် ..။အာရှသူတွေနဲ့ အဖြူကောင်တွေ နှစ်ပါးသွားတာတွေ ကိုကြည့်ပြီး စနိုး စိတ်တွေ မရိုးမရွ ဖြစ်လာသည် .။ လေးဘက်ကုန်းကာ ဖင်ထောင်ပေးထားနေတဲ့ အာရှသူလေးကို အဖြူကောင် က လီးတုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ ဆောင့်လိုးနေတာကြည့်ပြီး.. စနိုးမှာ ခံချင်စိတ်တွေ တဖွါးဖွါး ပေါ်ပေါက်ပြီး ထကြွလာရတော့ သည် ..။ မီရှယ်လ် က ဒီ . ..ဒီဗွီဒီထဲက အာရှသူတယောက် က စနိုးနဲ့ ချွတ်စွတ်ဘဲ ... ကြည့်ပါဆိုပြီး ငှားလိုက်တာပါ . .။
စနိုး အိမ်နေရင်း ထမိန်နွမ်းလေး ၀တ်ထားးသည် ..။
ကုတင်ပေါ်စောင်ခြုံရင်းကြည့်နေတာ..အပြာကားထဲက ယောင်္ကျားလိင်တန်ထွားထွားတွေကို ကြည့်ပြီး အသဲယားလာသည် . .။ စနိုး ရဲ့ ဖြိုးဖြိုးရွှေရင်တွေ ရဲ့နို့သီးလေးတွေ ..မာတောင်လာသည် . .။ ပေါင်ကြားထဲက ဆီးခုံကြီး က ဖါးခုံညင်းကြီးတကောင်လို ခုံးမောက်ပြီး အဖုတ်ထဲက ယားလာသည် .. ။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေ ထူအမ်းပြီး ယားလာသည် . .။ ပြေကျွတ်နေသော ထမိန်အပေါ်ကဘဲ အဖုတ်ကို ကိုင်စမ်းမိနေသည် . .လက်ချောင်းတွေက အဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားတွေ ကို စမ်းနေမိသည် .. ။အရေတွေ စိုနေပြီ ..။လက်တဖက်က အဖုတ်ကို ပွတ်နေမိတဲ့အချိန် ကျန် လက်တဖက်က နို့သီးတွေကို စမ်းကြည့်ပြီး .. ပွတ်နေမိသည် .. ။
စနိုး အခုအချိန်အထိ အပျိုစစ်နေသေးသည် ..။ သူမ ဖါသာ ပွတ်နှိုက်တာကလွဲလို့ ယောင်္ကျားလီး နဲ့ မတွေ့ဘူးသေး ..။ လီးနဲ့.. အထိုးမခံဘူးသေးတာကို
ပြောတာပါ..။ လီးကိုတော့ စနိုး ကိုင်ကြည့်ဘူးပြီးပြီ ..။ စနိုးနဲ့..အမြဲတွဲဖြစ်တဲ့..ကျောင်းအတူတက်တဲ့ မီရှယ်လ်ကြောင့်ပေါ့ . .။ ဒီတိုင်းပြည်ရောက်မှ စနိုး အပျို ဖြစ်သည် လို့ ပြောရမှာပါ ..။ နယ်စပ် က စခန်းတုံးက ရင်ပြားတင်ပြားလေး နဲ့ အပျိုပေါက်စ လေး ..။ ဒီ အမေရိကန်ပြည် ရောက်ပြီး မှ စနိုး ထွားလာ သည် ..။ အမေ ပြောတာ ထင်တာကတော့ ဒီ မှာ စားတဲ့ နို့ ..ထောပတ်..ဒိန်ခဲ တွေ နဲ့ ဟော်မုန်းတွေ များတဲ့ အသားတွေ ကြောင့် ဖြစ်မယ် ..တဲ့ . .။
မီရှယ်လ်နဲ့တည..ကလပ်တခုကိုလိုက် ရင်း.. ဘီယာသောက်ကြသည် .. ။ ကလပ်ကအပြန်. . ယောင်္ကျားလေးတအုပ် နဲ့..တောအုပ်လေးထဲ.. ဆေးခြောက်ရှူကြပြီး...မီရှယ်လ် ရဲ့အကိုတင်မီ က စနိုးကို နမ်းသည် . .။ စနိုးလဲ.. ဘီယာသောက်ထားတဲ့အရှိန်နဲ့.. သူ့ကိုပြန်နမ်းသည် ..။ ရီးစားလဲမဟုတ်.. ဘာမှလဲမဟုတ် ..။ တင်မီက စနိုး ၇ဲ့ နို့ကို ကိုင်သည် ..။ နို့သီးလေးတွေကို ပွတ်သည် . .။လက်မ နဲ့ လက်ညှိုးကိုသုံးပြီး ဖွဖွလေး ချေသည် . .။ သူ့ ဘောင်းဘီ ဇစ်ကို ဖွင့်ချပြီး လီးကို ထုတ်သည် . .။
( စနိုး ..ကိုင်ကြည့် ..)
ဆိုပြီး စနိုးလက်ထဲ လီးကြီး လာထည့်သည် . .။ စနိုးလဲ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားပြီး တင်မီ့ ... လီးတန်ကြီးကို ကိုင်သည် . .။ ဖျစ်ညှစ် သည် . .။ ရှေ့တိုးနောက်ငင် ကစား သည် . .။ ဒီထက်တော့မပို .. ။
အော် . .မနေ့ညကလဲ တအိမ်ထဲနေတဲ့ .. ကိုတိုးကြီး ရဲ့လီးကို..စနိုးတွေ့ဘူးလိုက်ရသည်.. ။ ကိုတိုးကြီး က မြေအောက်ထပ် ( ဘေ့စ်မင့် ) မှာ နေသည် ..။ မြေအောက်ထပ်မှာလဲ အိမ်သာ နဲ့ ရေချိုးခန်းတွဲရက် ပါ သည် ..။ စနိုး..မိုနာတို့.. ညီအမနဲ့ကိုတိုးကြီးက တအိမ်ထဲနေပြီး မောင်နှမတွေလိုဘဲ.. အတူချက်စား.. အတူ.. ဗွီဒီယို.. ကြည့်ကြ သည် ..။ ဒီအိမ်မှာ စနိုး ..မိုနာ ..အမေ ..နဲ့ ဖူးဖူးတို့နေသည် . .။ ကိုတိုးကြီး ရှိတဲ့ မြေအောက်ထပ် ကို စနိုး ..မိုနာတို့ ညီအမတွေ နဲ့ ဖူးဖူးတို့ တံခါးမရှိ ဒါးမရှိ ဆင်းသွားနေကြ.. ရုပ်၇ှင် အတူ ထိုင်ကြည့်နေကျ ဖြစ်သည် .. ။ ဖူးဖူး က စနိုးတို့နဲ့ ဘာမှ မတော် ။ နယ်စပ်စခန်းထဲက ဆွေမျိုးလိုဘဲ အတူတူနေခဲ့ကြတဲ့ သူတွေ ပေါ့ .. ။
ကိုတိုးကြီး က စနိုးတို့ဖူးဖူးတို့ လို ထိုင်းနယ်စပ် က လာခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး ..။ ကိုတိုးကြီးက.. သင်္ဘော၀မ်းဘိုက်ထဲမှာ တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့အတူ.. ခိုး၀င်ပြီး. .နယူးယောက်ကို ရောက်လာတဲ့ လူ ..။ ဒီရောက်မှ ..အလုပ်လုပ်ခွင့် ( ၀က်ပါမစ်) ရအောင် ကြံဖန်ပြီး တဆင့်ပြီးတဆင့် အဆင်ပြေ လာသူတယောက်ပါ . .။ အလုပ် အမျိုးမျိုး လုပ်လာသူ တယောက်...။
မနေ့ညက ကိုတိုးကြီး နေတဲ့ အောက်ထပ် စနိုး ဆင်းသွားတော့ ကိုတိုးကြီးအပြာဒီဗွီဒီ ရုပ်၇ှင်ကြီး ပြရက်တန်းလန်းကြီး နဲ့ ထိုင်ရက်ကြီး အိပ်ပျော်နေသည် . .။ သူ အိပ်မပျော်ခင်က လုံချည်ကိုဖြေချပြီး ကွင်းထုနေပုံဘဲ . .။ ကြည့်ရတာ အလုပ် ၃ခုလောက် ဆက်တိုက်လုပ်တဲ့လူမို့.. အရမ်းပင်ပန်းပြီး. ကွင်းထုနေရင်း.. ထိုင်၇က်ကြီး.... အိပ်ပျော်သွားတဲ့ပုံပါ . .။ သူ့လုံချည် က ပြေကျနေပြီး သူ့လီးညိုညိုကြီး က မတ်မတ်ကြီး တောင်နေသည် . .။
စနိုးလဲ ရုတ်တရက် ကိုတိုးကြီး ရဲ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီးကို မြင်လိုက်ရတော့ .. ရင်တွေတ အားခုန်..စိတ်တွေ လှုပ်ရှားရသည် . .။ ကြက်သီးတွေ ထရသည် . .။ ကိုတိုးကြီးနဲ့.. သွားအတူလာအတူ... နီးနီး.စပ်စပ်နေလာကြတာ.. သူ့မှာ...ဒီလို..လီးတုတ်တုတ် ရှည်ရှည်ကြီး ရှိနေတာ မသိရဘူး . .။ စနိုးလဲ သူ့ဘေးနားကပ်ပြီး လီးကြီးကို.. သေသေချာချာကြည့်တာတောင် ကိုတိုးကြီး..တရှူးရှူးနဲ့ အိပ်မောကျနေပြီး . . ဘာမှမသိ. .။
( ဟိတ်..စနိုး . .)
ဘယ်လောက်တောင် ကြည့်ကောင်းကောင်း နဲ့ ကြည့်မိနေသလဲ မသိဘူး ..။ အနောက်က ခေါ်သံကြောင့် လှည့်ကြည့်မိလိုက်တော့ . .ဖူးဖူး အောက်ထပ် ဆင်းလာတာဖြစ်နေသည် . .။ ဖူးဖူး က စနိုးနဲ့ မိုနာတို့ ညီအမတွေထက် အသက်နဲနဲ ပိုကြီး သည် . .။ ၂၅နှစ်လောက် ရှိပြီ . .။ ရီးစားထားဘူးပြီး ယောင်္ကျား အတွေ့အကြုံရှိသည်။ စနိုးက . .
( ရှူး . .)
ဆိုပြီး လက်ညှိုးကို သူ့နှုတ်ခမ်းလေးမှာကပ်ပြီး ..ကိုတိုးကြီး လီးပေါ်နေတာကို ဖူးဖူး ကို ပြလိုက်သည် . .။ ဖူးဖူး လဲ ခြေဖေါ့နင်းပြီး အနားကပ်လာသည် . .။ ကိုတိုးကြီး လီးကြီးကို သေသေချာချာ ကြည့်သည် ..။ ဖူးဖူး သည် ကိုတိုးကြီး ရဲ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီး ကို အနီးကပ်ကြည့်၇င်း . .သူမပေါင်ကြားကို လက်နဲ့ ကိုင်လိုက်သည် .. ။ စနိုးက သဘောကျစွာနဲ့ တခိခိ ရယ် သည် .။ မနေ့ည က အကြောင်း ပြန်တွေးလိုက်မိတော့ ..ကိုတိုးကြီး လီးကြီးကို ပြန်မြင်ယောင်သွားပြီး ကိုတိုးကြီး လီးကြီးကို ထပ်မြင်လိုစိတ်ဖြစ်မိရ သည် ..။ ကိုတိုးရဲ့လီးကြီး က ညိုညိုကြီး ..။ အကြောကြီးတွေ ထောင်ထနေပြီး . .ထိပ် က ဒစ်ဆိုတဲ့ ဟာကြီး က ကောက်ကောက်ကြီး .. ။ ဒါကြီး နဲ့ စောက်ပတ်ထဲ ထိုးထဲ့ ရင် ဆန့်မှ ဆန့်ပါ့မလား မသိဘူး . .။ စောက်ပတ် က လက်ညှိးတောင် မနဲ သွင်းနေရတာ . .။ ကွဲပြဲသွားမလား . .ဆိုပြီး ကြက်သီးတွေ ထရ သည် . .။
စနိုး ကိုတိုးကြီး ရဲ့ လီးညိုကြီးကို မြင်ယောင်ရင်း . .သူမ အဖုတ်ကို ဖိဖိပွတ်ရင်း တဟင်းဟင်း နဲ့ ကာမ အရှိန်တွေ တက်လာသည် .. ။ အရေတွေ စိုစိုရွှဲနေတဲ့ မိမိ အဖုတ်ထဲကို တခုခုနဲ့ ထိုးသွင်းကာ
အာသာဖြေဖျောက်လိုတဲ့စိတ်တွေ အလွန်အမင်း ဖြစ်ပေါ်နေပြီ .. ။ ဖူးဖူးကတော့ပြောသည် ..။ ဒါသဘာ၀ဘဲ စနိုး ...တဲ့ . .။ ယောင်္ကျားတွေ က မိန်းမ စောက်ပတ်ကို မြင်ရင် စိတ်ကြွ သလို ..မိန်းမတွေ ကလဲ ယောင်္ကျားလီးကိုတွေ့ရင် စိတ်ကြွကြရတာဘဲပေါ့.. တဲ့ . .။
ကိုတိုးကြီး သည် စနိုးတို့အမေ ဒေါ်အယ်နာ နဲ့ အလုပ် .. အတူတူ လုပ်ရာ က ... ဒေါ်အယ်နာ က ယောင်္ကျားလေး အဖေါ်လဲ ရအောင် သူတို့နဲ့ စပ်ပြီး .. အိမ်ငှားနေဖို့ပြောတာနဲ့ ဒေါ်အယ်နာတို့နဲ့ အခုလို လာပေါင်းပြီး နေတာ ဖြစ်သည် ...။ သမီး၂ယောက် အမေ ဒေါ်အယ်နာ သည် .. ဖြူဖွေးတောင့်တင်းဆဲ.. ကိုယ်လုံး ပိုင်၇ှင် ဒေါ်အယ်နာ ..ဖြူလွန်းဖွေးလွန်းလို့ ..အိမ်နံမည် စနိုးလို့ ခေါ်တဲ့ ခင်နှင်းဖြူ ...သူမထက် တနှစ်ဘဲ ကြီးတဲ့ တောင့်တင်းစိုပြေတဲ့ မိုနာ .. သူတို့ နဲ့ အရမ်း ရင်းနှီးတဲ့ ဖူးဖူး ..မိန်းမချော ၄ယောက် နဲ့ တအိမ်ထဲ နေရတဲ့ ကိုတိုးကြီး ..သည် မချောလေးယောက် ကိုယ်တယောက် ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဖြစ်နေပြီ . .။
အတူတူနေတော့ . .ဒီ မချော၄ယောက် အောက်စ လွတ်တတွေ .. ဖင်ပေါ်တာတွေ တွေ့လာရသည် . .။ တခါတလေ. .... သူတို့ဖါသာပေါင်ကြားပွတ်နေတာ.... နှိုက်နေတာတွေတောင် တွေ့ဘူးရသည် . .။ ဒါတွေကို သာယာမိနေပြီး ကိုတိုးကြီးလဲ ... ဒီမိန်းမတွေ ရဲ့ ခိုင်းဘတ်ကြီး ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာ သည် .. ။
ဒေါ်အယ်နာ သည် ကိုတိုးကြီး ကို အလွန်ဘဲ အားကိုးသည် ..။ အားထားသည် ..။ လင်သေ မုဆိုမ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး တောင့်တောင့်တင်းတင်းကြီးမို့ ကိုတိုးကြီး သည် ဒေါ်အယ်နာ နဲ့နီးနီးစပ်စပ် နေရတာကိုရော ..ချစ်စရာ စိုပြေချောမောတဲ့ ညီအမ စနိုး နဲ့ မိုနာ ..ဖူးဖူး တို့နဲ့ ဒွေးရောရှက်တင် နီးစပ်စွာ နေရတာကော .. စိတ်တွေ လှုပ်ရှားမိ.. ဖေါက်ပြန်တဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်မိရ သည် . .။ ကိုတိုးကြီး ..အလုပ်ကဆင်းတော့ ညနေစောင်းနေပြီ .. ။
မိုးက တနေကုန် သဲသဲမဲမဲ ရွာနေတာ ခုထိ လေရောမိုးရော သဲနေသည် . .။ အိမ်အပြန် . .စနိုးမုန့်မှာလိုက်တာ သတိရပြီး အိမ်အပြန်လမ်း မှာ ရှိနေတဲ့ လာဟော . .ဆိုတဲ့ .. ပါကစ္စတန်ဆိုင်လေး ကို၀င်ပြီး စနိုး မှာလိုက်တဲ့ မလိုင်မုန့်တွေ ၀င်၀ယ် သည် . .။ စနိုးနဲ့ မိုနာတို့ ညီအမတွေ နဲ့ တအားရင်းနှီးသည်။ ဖူးဖူး ဆိုတဲ့ တယောက် နဲ့လဲ ဒီလိုဘဲ ..။ ဖူးဖူး က ပုတ်လားခတ်လား . . ကလိထိုးလိုက် ဆွဲဆိတ်လိုက် အမြဲ လုပ်တတ် သည် ..။ မိုနာ နဲ့ သူ သူတို့ အားလုံး ချက်စားဖို့ စျေးအတူ အမြဲ ထွက်၀ယ်ဖြစ်သည် ..။
နွေရာသီ မှာ မိုနာသည် ပေါင်ရင်းအထိ တိုသော ဘောင်းဘီ ပါးပါး ပြတ်ပြတ်လေး ၀တ်လေ့ရှိ သည် ..။ စျေး၀ယ်ပြီး ဘိုက်ဆာ ရင် ..( Roy Rgers ) ဆိုင်မှာ အတူတူထိုင်စားလေ့ ရှိရာ မိုနာ ရဲ့ ပေါင်တန်ရှည် တွေကို သူ အနီးကပ် မြင်ရသည် . .။ ပေါင်ဖြူဖြူတွေ မှာ မွေးညင်းစိမ်းနုနုလေးတွေ ကိုတွေ့မြင်ရတာ သူ့စိတ်တွေ မရိုးမရွ ထကြွရ သည် . .။
တကြိမ်မှာ ကိုတိုးကြီး သည် မိုနာ့ ပေါင်တန်ကို လက်ညှိုးလေးနဲ့ တို့မိသည် . .။ လက်ညှိုးလေးနဲ့ ပွတ်နေမိသည် . .။ မိုနာ သည် သူ့ကို စိတ်မဆိုး . .။
သူ လုပ်တာကို မတား ..မရုန်းတဲ့အပြင်..တခစ်ခစ် နဲ့ သဘောကျ သည် . .။ အောက် နှုတ်ခမ်း ဖေါင်းဖေါင်းလေးကို သွာလေးနဲ့ ကိုက်ပြီး
( ယားတယ်. .အကို . .)
လို့ပြောသည် ..။ သူလဲ မိုနာ့ ပေါင်တွေ ကို ကားပေါ်မှာလဲ ပွတ်မိသည် ..။သမီးရီးစားလဲ မဟုတ် . .ဘာလဲ မဟုတ်..ပေါင်တော့ ပွတ်ပေးနေမိပြီ . .။ တနေ့ ကိုတိုးကြီး ရုပ်၇ှင်အခွေ ထိုင်ကြည့်နေခိုက် မိုနာ အောက်ထပ် ဆင်းလာ သည် .။
( ဟိတ်..ဘာ လုပ်နေလဲ . .ဗွီဒီယို ပိတ်လိုက် . .)
ကိုတိုးကြီး..မိုနာ့စကားကို နားထောင်သည် . .။ ရီမုတ် နဲ့ ထောက်ကနဲ တီဗွီ ကို ပိတ်လိုက်သည် . .။ မိုနာ သည် စီဒီစက်ဆီ လျောက်သွားကာ . .သီချင်း ဖွင့်လိုက် သည် .။
( အကို့ကို ကပြမလို့ . .ကြည့် . .)
သီချင်းသံ စတင် ထွက်ပေါ်လာ သည် . .။ ဗနင်လာအိုက်စ် ရဲ့ အိုက်စ်အိုက်စ်ဘေဘီ ဆိုတဲ့ သီချင်း …. ကိုတိုးကြီး က ဆိုဖါမှာ ..ထိုင်နေတော့ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ မိုနာ ရဲ့ဘောင်းဘီ တိုတိုလေးကြောင့် ပေါင်အရင်းကနေစပြီး ဖြူ၀င်းနေတဲ့ ပေါင်တန်ကို သူ့မျက်နှာ နားကပ်ပြီး မြင်တွေ့နေရ သည် ..။ တုံတုံတုံ . ..တုံတုံတုံ . .. .
အိုက်စ်အိုက်စ် ဘေဘီ..ဘေဘီ..တုံတုံတုံ . . တုံတုံတုံ ..တုံ့တုံ . . မိုနာ က သည် ..။ မမှောင့်တမှောင် အခန်းထဲ သူတို့ ၂ယောက်ထဲ ရှိနေသည် . .။ အခုအခံ မပါတဲ့ ဘလောက်စ် ကြောင့် ကနေတဲ့ မိုနာ့ ရင်သားစိုင်တွေ က တုန်ခါ ..လှုပ်နေကြ သည် ..။ ရင်သားထိပ်သီးလေးတွေ က ဘလောက်စ် ပါးပါးအသားမှာ ကပ်ပြီး အရာလေး ထင်းနေသည် .. ။ အသဲယားစရာပါလား . .မိုနာရယ်. . .။
ကိုတိုးကြီး စိတ်တွေ အရမ်း လှုပ်ရှားပြီး လုံချည်ကြားက လီးတန်ကြီး ဒိုင်းကနဲ မတ်မတ်တောင်လာရ သည် . .။ ကားက အိမ်ေ၇ှ့ကို ရောက်ပြီး ထိုးဆိုက်လိုက်ရတာကြောင့် ကိုတိုးကြီး ရဲ့ .. အတွေးမြင်ယောင်မှုတွေ ရပ်သွား သည် .. ။
ကိုတိုးကြီး စနိုးအတွက် မလိုင်မုန့်ထုပ်ကလေးဆွဲပြီး .. အိမ်ထဲပြေး၀င်သည် ..။ မိုးကသဲနေဆဲ . .။ လေကလဲ ပြင်းနေဆဲ .. ။
(စနိုး . .နင့်အတွက် မလိုင်မုန့်ပါတယ် . .)
စနိုး ဘယ်ေ၇ာက်နေလဲ .. ။
(စနိး...စနိုး . ..)
( ကိုတိုးကြီး . ..)
စနိုးကို ကြည့်ရတာ အိပ်ရာထဲက ထလာတဲ့ ပုံဘဲ ..။ တွန့်ကျေနေတဲ့ ဘလောက်စ် အထဲမှာ ဘာမှ ခံ၀တ်ထားပုံမပေါ်ဘူး . .။လုံး၀န်းတဲ့ ရင်သားတွေက လှုပ်တုတ်တုတ် နဲ့ .။ ထမိန်ဟောင်းလေးကလဲ နွမ်းကျေနေသည် . .။
( စနိုးက အျိပျနတောကိုး . .)
( အိပ်ပါဘူး . .မိုးအေးလို့ စောင်ခြုံထဲ ကွေးနေပြီး ဗွီဒီယို ကြည့်နေတာ . .)
စနိုး က မလိုင်မုန့် သိပ်ကြိုက်သည် . .။ ကိုတိုးကြီး ယူလာသောမလိုင်တွေကို..ဖွင့်နှိုက်နေတုံး ..သူမ ဖင်အနောက်ဖက် ထမိန် မှာ အရေတွေ စိုကွက်နေတာ ကိုတိုးကြီး တွေ့လိုက် သည် ..။ ကြည့်၇တာ ရာစီသွေးတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး . .။ မာစတာဗေးရှင်း ..လက် နဲ့ အာသာဖြေနေတာ ဖြစ်ဖို့များသည် ..။ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိခိုက်မို့ ကိုတိုးကြီး .. စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်မိနေသည် . .။ စနိုး က မလိုင်မုန့်တွေ ပလုပ်ပလောင်း စားနေချိန် . .စနိုး ရဲ့စွင့်ကားပြီး.. အနောက်ဖက်ကို ကော့ကောက် ဖုထွက်နေတဲ့ ဖင်တွေကို မသိမသာ ဖတ်ကနဲ ရိုက်လိုက်သည် ..။
( ဟိတ်..ဘာလဲ ကိုတိုးကြီး . .)
( မလိုင်ကြိုက်လို့လား မသိဘူး . .စနိုး ဖင်တွေ ကြီးလာသလိုဘဲ . .)
( အို..ကိုတိုးကြီးကလဲ . .ကြီးလို့လား . .)
( ကြီးတာပေါ့ . .ဒီမှာ ကြည့်လေ . .)
ကိုတိုးကြီး လက် က ဖင်တုံးတွေ ကို ဆုတ်ကိုင်ပြလိုက် သည် . .။
စနိုး ရင်တွေတုန်သွား သည် ..။
( ဟိတ်..ဘာလို့ကိုင်တာလဲ . .)
( ဖင်ကြီးလို့ပေါ့ . .)
စနိုး က နှုတ်ခမ်းလေးစူပြီး ..
( ကိုတိုးကြီး လဲ ကြီးတာဘဲ . .မလိုင်ခဲတွေ အရမ်းစားလို့လား. .)
လို့ပြောသည် .. ။
( ဘာ . .ငါက ဘာကြီးလို့လဲ . .)
( ဟီး . .ကိုတိုးကြီး က ကြီးတာပေါ့ . .မဲမဲတုတ်တုတ်ကြီး . .)
( ဘာပြောတယ် . .)
( ကိုတိုးကြီး ရဲ့ ပေါင်ကြားက ဟာကြီးလေ .. အကြီးကြီး ဘဲ . .)
( အံမာ..စနိုး .. ဘယ်လိုသိလဲ...ပြောစမ်း . . ဘယ်တုံးက မြင်လို့လဲ . .)
( ဟိုတနေ့က ကိုတိုးကြီး ရုပ်၇ှင်ကြည့်ပြီး အိပ်ပျော်နေတာ . .အတန်ကြီး က မတ်မတ်ကြီး ထောင်နေတာ တွေ့တာပေါ့ . .မဖူးဖူး တောင် တွေ့သေးတယ် . .)
( နင်တို့တွေကတော့ စိတ်ထဲ ဘာဖြစ်သွားလဲ . .ရင်တွေ ဘာတွေခုန်သွားလား . .)
လို့ စပ်ဖြဲဖြဲ နဲ့ မေးသည် . .။ စနိုးလဲ မလိုင်တွေကို ပလုပ်ပလောင်းနဲ့ စားရင်း
(အသဲယားသွားတာပေါ့... . .ကြောက်စရာကြီး . .)
လို့ ပြောသည် .. ။
( စနိုး..လာ..လာထိုင်စမ်း . .ဒီမှာ..)
ဆိုပြီး..စနိုးကို လှမ်းဆွဲပြီး သူ့ပေါင်ပေါ်ထိုင်စေသည် ..။
( အိ..ကိုတိုးကြီး . .ဘာကြီး လဲ ..မာမာကြီး . .)
တောင်နေတဲ့ ကိုတိုးကြီးရဲ့ လီးတန်ကြီးပေါ် ထိုင်မိလို့ စနိုး သူမဖင်အိအိကြီးတွေ ကို ကြွလိုက်သည် .. ။
( ကိုတိုးကြီးဟာကြီး မာထောင်နေတယ် . .အဟိ. .)
ကိုတိုးကြီး ကစနိုးထမပြေးနိုင်အောင် ဆွဲဖိထားသည် . .။
ကိုတိုးကြီး ရဲ့ လီးတန်ထိပ်ဖူးကြီး က လုံချည် နဲ့ ထမိန် ကြားက ခံနေလင့်ကစား ..စနိုးရဲ့ စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းကြီးကို ဖိထိုးမိနေသည် . .။ စနိုး တအားစိတ်လှုပ်ရှားသွားသည် . .။ တကိုယ်လုံး .. တုန်ခါသွားသည်..။
( အို..အို . ..ကိုတိုးကြီး . .ထိုးမိနေတယ် . .)
( ကိုတိုးကြီး ဟာကြီး က စနိုးဟာကို ထိုးနေတယ် ..)
( စနိုးရဲ့ ဘာကို ထိုးမိနေတာလဲ . .)
( အို . .ပြောချင်ဘူး . .)
(ပြောပါ..ရှက်မနေပါနဲ့ဟာ..ဘယ်သူမှ ကြားတာမှ မဟုတ်တာ . .)
လို့ပြောလိုက်သည် . .။ ကိုတိုးကြီးရဲ့ လီးတန်ကြီးက ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲ သူမ စောက်ပတ်ကို ထိုးနေသည် . .။ ကျင်ကနဲကျင်ကနဲ ဖြစ်သွားရသည် . .။ ကြက်သီးတွေလဲ တအားထရသည် . .။
( ကိုတိုးကြီး . .စနိုး..စနိုး . ..)
( ဘာဖြစ်လဲ . .)
( စိတ်တွေ တမျိုးကြီးဘဲကွာ . .)
( လာ..ဒီစိတ်တွေ ပျောက်သွားအောင် ကိုတိုးကြီး လုပ်ပေးမယ် . .)
ကိုတိုးကြီးသည်စနိုးလက်ကလေးကိုဆွဲကာသူ့လီးတန်ကြီးပေါ်အုပ်တင်ပေးပြီး... ..ဆုတ်ကိုင်စေသည် .. ။ မာမာနွေးနွေးအတန်ကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ထားမိရချိန် စနိုး ရဲ့ ပေါင်ကြားမှာ အရေတွေ တသွင်သွင်စီးဆင်းနေပြီ . ..။
( ကြီးလိုက်တာ ကိုတိုးကြီးရယ် . .)
( ပွတ်ပေး...လက်ကလေးနဲ့ ပွတ်ပေး . .)
စိတ်ညှို့ခံထားရတဲ့ လူလို . .စနိုးသည် သူ ခိုင်းတာက်ု နာခံနေမိပြီ . .။ သူ့ လီးတန်ကြီး ကို ဆုတ်ကိုင်ပွတ်သပ်ပေးနေမိသည် . ..။တင်မီဆိုတဲ့ ကောင်လေးကို တောင် စနိုး လီးကိုင်ပေးဘူး သည် ..။ ကိုတိုးကြီး သည် သူ့အပေါ် အမြဲ ကောင်းသည် . .။ မုန့်လဲအမြဲ၀ယ်ကျွေးသည် . .။ သူ့ကို လုပ်ပေးချင်နေသည် . .။
( စနိုး . .)
( ဟင်. .ဘာလဲ . .)
( အပြာကားကြည့်ဘူးတယ်မှုတ်လား . .)
( အင်း . .)
( စုတ်တာတွေ တွေ့ဘူးတယ်မှုတ်လား . .)
( ငါ့ကို စုတ်ပေးပါလားဟင် . .)
( စနိုးတခါမှ မလုပ်ဘူးဘူး . .)
( အခု လုပ်ကြည့်ပေါ့ . .လာ . .)
ကိုတိုးကြီး က သူ့ လုံချည်ကို ဖြေချလိုက်သည် . .။ မြွေဟောက်ကြီးတကောင်ပါးပျဉ်းထောင်နေသလို မတ်မတ်တောင်နေတဲ့ လီးမဲမဲကြီး ကို စနိုး တွေ့လိုက်ရပါတော့ သည် . .။
( ငုံလိုက်..စနိုး . .)
စနိုး လီးတန်ကြီး ရဲ့ ထိပ် ကို လျာထိပ် နဲ့ တို့ကြည့်လိုက်သည် .. ။ ဒစ်ပြဲကြီး က .. ကားကားကြီး . .။
( ငုံလိုက် စနိုး . .)
စနိုး သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းငုံလိုက်တော့ ငံကျိကျိ အရသာကို ရလိုက်သည် . .။
( စုတ်. .စုတ်ပေး . .)
စနိုးလဲ အပြာကားတွေ ကြည့်ဘူးထားတော့ အပြာကားထဲက လီးစုတ်တာတွေ တွေ့ဘူး နေပြီးသားပါ . .။ လီးမဲမဲ တုတ်တုတ်ကြီးကို စုတ်ပေးနေခိုက် အိမ်ေ၇ှ့တံခါးကြီး ချောက်ကနဲ ဖွင့်လိုက်သံ ကြား လိုက်ရပါသည် ..။
( ဟာ..မာမီ ပြန်လာပြီ ထင်တယ် . .စနိုး တက်တော့မယ်. . )
စနိုး အိမ်အပေါ်ထပ်ကို တက်ပြေးသွားပါသည် . .။ လီးကြီးတောင်ရက် နဲ့ ကိုတိုးကြီး ကျန်ရစ်သည် . .။ ဒေါ်အယ်နာ နဲ့ ကိုတိုးကြီး သည် ( ဆေ့ဖ်ဝေး ) ဆိုတဲ့ စူပါမားကက်ကြီးမှာ လုပ်ကြ သည် . .။ အတူတူလုပ်ကြတယ် ဆိုပေမဲ့ ..နေရာချင်းတော့ ကွဲ သည် .. ။ ကိုတိုးကြီး က စတိုကီပါ ..။ အနောက်ဘက် က စတိုခန်းကြီးထဲ မှာ လုပ်ရ သည် .. ။ ပစ္စည်းတွေ ကုန်ကားကြီးတွေ နဲ့ ရောက်လာ ရင်လဲ သူတို့ ဆိုင်ကြီးထဲကို သွင်းယူဖို့ . .နေရာ ချထားပေးဖို့ လုပ်ရ သည် ..။ ဒေါ်အယ်နာကတော့ သစ်သီးတွေ နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် တွေ ကို .. တာ၀န်ယူရ သည် . . ..။
ကိုတိုးကြီးသည် သူ့ရဲ့ ထမင်းဒစားချိန် မှာ ဆိုင်ကြီး ရဲ့ ခေါင်မိုးပေါ် (Roof Top ) ကို တက်ပြီး ထမင်းစားတတ် သည် ..။ ခေါင်မိုးပေါ်ကနေပြီး သူတို့ ဆိုင်ကြီး ဘေးက တခြားဆိုင်လေးတွေ ဘက်ကို ငေးကြည့် ရင်း အစားစား .. အရေသောက်တတ်သည်. . .။ ခေါင်မိုးပေါ်ကို လူတိုင်း တက်လို့ မရပေမဲ့ ကိုတိုးကြီး က စတိုကိပါ မို့ သော့တွေ ကိုင်သူ ဖြစ်တာရယ် .. သူက ခေါင်မိုးပေါ်တက်တက်ပြီး ရှင်းလင်းရတာတွေ ရှိတာရယ်ကြောင့် တက်နိုင်တာ ဖြစ်သည် ..။
ကိုတိုးကြီး ခေါင်မိုးပေါ်တက်တက်ပြီး ထမင်းစားတတ်မှန်း သိတဲ့ ဒေါ်အယ်နာ လဲ ကိုတိုးကြီးကို စကားပြောစရာ ..ရှိရင်. . ..ဘယ်မှာရှာရမလဲ သိနေသည် . .။ ခေါင်မိုးပေါ်ကို တက်လိုက်လာလေ့ ရှိ သည် ..။
ဒီနေ့ ကိုတိုးကြီးရော ဒေါ်အယ်နာရော ညနေပိုင်း လုပ်ရ သည် . .။ ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ မှောင်နေပြီ ..။ ခေါင်မိုးပေါ်ကို တက် ပြီး သူ အိမ်က လုပ်လာတဲ့ ပေါင်မုန့်ယိုသုတ် ကို စား သည် . .။ ဆိုင် ကနေ ၀ယ်တဲ့ ပက်ဆီဘူး ကို ဖွင့်သောက်သည် . .။ ကိုတိုးကြီး သည် မနေ့ည ကအိမ်မှာ .. မိုနာနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာကို.. ပြန်စဉ်းစားမိတော့သူ့ လီး က ဒိုင်းကနဲ မတ်လာ သည် . .။ မနေ့ညက သူနဲ့ မိုနာ ဘဲ အိမ်မှာ ရှိသည် . .။ ဒေါ်အယ်နာ နဲ့ စနိုး တို့ တနင်္ဂနွေညမို့ဘုရားကျောင်း သွား သည် ..။ ဖူးဖူးကတော့ အလုပ်ရှိလို့ သွားသည် ...။ မိုနာက
အလုပ် မနက်ပိုင်း လုပ်ခဲ့လို့ ပင်ပန်းတယ် ဆိုပြီး မလိုက် ။
ကိုတိုးကြီး သည် သူနေတဲ့ မြေအောက်ထပ်မှာ စတီရီယို စီဒီ စက် . .ဒီဗွီဒီစက်. .တီဗွီ ..အစုံ ၀ယ်ထားသည် ..။ ဒေါ်အယ်နာတို့လဲ ကိုတိုးကြီး ဟာတွေ ယူ သုံးနိုင်နေတာနဲ့ ..အိမ်ပေါ်ထပ် မှာ ၀ယ်ထားမနေတော့ . .။ သူတို့..သီချင်းဖွင့်လိုရင်.. ကာရာအိုကေ ဆိုချင်ရင်.. ဒီဗွီဒီကြည့်လိုရင် ကိုတိုးကြီး ဆီ .. ဆင်းသွားပြီး သုံးလေ့ ရှိ သည် ..။ သတင်းကြည့်နိုင်ရန် ရိုးရိုးတီဗွီ အသေးလေး ဘဲ အပေါ်ထပ် သူတို့ အိပ်ခန်းထဲ ထား သည် . .။
မနေ့ညက မိုနာ သည် ကိုတိုးကြီး နေတဲ့ မြေအောက်ထပ်မှာ ရောက်နေသည် . .။ ကိုတိုးကြီးနဲ့ အတူ ရုပ်၇ှင်ထိုင်ကြည့်နေတာ ..။ နှစ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖါကြီးမှာ အတူတူ ထိုင်ကြည့်နေကြသည် .. ။ ဗွီဒီယို က စုံထောက် အက်ရှင်ကားတခု ဖြစ်ပေမဲ့ တော်တော်ကြမ်း သည် ..။ နံမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေ နဲ့ ရိုက်ထားပေမဲ့ ..
လိင်ဆက်ဆံရေးတွေကို အသားပေးထားသည် ..။ ၀တ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးတီး ခန်းတွေတင်မက . .လိင် ဆက်ဆံတာတွေ ကို ..အသေးစိတ် ပီပီပြင်ပြင် ပြ သည် . .။
ကိုတိုးကြီး သည် သူ့နဘေးမှာ အတွင်းခံ ခံ၀တ်မထားတဲ့ တီရှပ်ပါးပါး နဲ့ . .ဘောင်းဘီ အတိုလေး ၀တ်ထားးပြီး . . ပေါင်တန်ရှည်ဖွေးဖွေး နှစ်ချောင်းကို ထောင်ကာ ရုပ်ရှင် စိတ်၀င်တစား ကြည့်နေသော မိုနာနဲ့ အမှောင်ချထားတဲ့ အခန်းထဲ .. လိင်အသားပေးရုပ်၇ှင်ကို ကြည့်နေရလို့ စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်နေပေ သည် . .။ မိုနာ သည် စနိုးထက် ပိုပြီး အသားဖွေးဖြူ ..ပြီး ပိုလဲ ချောသည် လို့ ကိုတိုးကြီး ထင် သည် . .။ ရုပ်ရှင်ကကြမ်းတာအပြင် မိုနာရဲ့ ပေါင်တန်တွေကလဲ..လှလွန်းဖွေးလွန်းတာကြောင့်ကိုတိုးကြီးပေါင်ကြားက လီးတုတ်တုတ်ကြီး ဟာ မာကျောတောင်မတ်နေသည် . .။
မိုနာမှာလဲ ကိုတိုးကြီးနည်းတူဘဲ စိတ်တွေ ထကြွနေသည် ..။ အိမ်ကြီးတခုလုံး သူမ နဲ့ ကိုတိုးကြီး ဘဲ ရှိနေတဲ့အပြင် အမှောင်ကလဲ ချထားသည် ..။ ရုပ်၇ှင်က လဲ ဘာကြမ်းသလဲ မမေးနဲ့ . .။ ယောက်ျားက မိန်းမ ကို ဆောင့်တာကို အနီးကပ်တောင် ပြလိုက်သေး သည် .. ။ အင်း.. ကနဲ.. အင်းကနဲ ...ဆောင့်လိုက်တိုင်း အသားချင်း ဖပ်ကနဲဖပ်ကနဲ ရိုက်ခတ်တဲ့ အသံ က တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အခန်းထဲ ..စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဖြစ်နေသည် . .။ ကြမ်းတဲ့ အခန်းတွေ ပြီးသွားပြီး အက်ရှင်အခန်းတွေ ရောက်လာတော့ ...
( ဟင်..မိုနာ . .)
( ရုပ်၇ှင်က .. အရမ်းဟော့တာဘဲကွာ . .မိုနာ . . စိတ်တွေ တမျိုးကြီး ဖြစ်လာတယ် . . )
( အကိုရောဘဲ . .)
( တခု ပြောပြလို့ရမလား.)
( ပြောလေ . .ဘာလဲ . .)
( မိုနာလေ.အဲလိုဆက်စ်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရင်.. မိုနာ့နို့တွေက.. တအားတင်းလာတယ်သိလား. .. အထူးသဖြင့် နို့သီးလေးတွေ ..မာတောင်ပြီး တင်းမာလွန်းလို့ .. မကိုင်ဘဲ မနေနိုင်ဘူး ချေပွတ်မိရတယ် . .)
( ဟေ..ဟုတ်လား . .)
( အကို စမ်းကြည့်ပါလား . .လာ..အကို့လက် ပေး . .)
မိုနာက သူမ နို့သီးလေးတွေ မာတောင်နေတာ စမ်းခိုင်းတော့ ကိုတိုးကြီး တုန်ရီတဲ့ လက်တွေ နဲ့ စမ်းလိုက်မိသည် ..။
( အေး..ဟုတ်တယ်..မိုနာ . .အို..မာတောင်နေတာဘဲ .. အကို ချေပွတ်ပေးရမလား . .)
မိုနာ့ နို့သီးဖုလေးတွေ ကို တီရှပ် အပေါ်ကဘဲ သူ လက်မနဲ့ လက်ညှိုးသုံးပြီး ဖွဖွလေး ချေနယ်ပေးနေသည် . .။
( နဲနဲ သက်သာလား . .)
မိုနာ ညည်းသည် ..။ ( အင်း..အင်....အင်း...)
( မိုနာ့ ကိုယ်တခြားနေရာတွေမှာေ၇ာ . . ဘာဖြစ်သေးလဲ . .)
( ဖြစ်တယ်. .)
( ဘာဖြစ်လဲ . .ဘယ်နေရာမှာလဲ . .)
( ပြောမထွက်ဘူး..ရှက်တယ်. .)
( ပြောပါ မိုနာရယ် . .ဒို့ ၂ယောက်ထဲရှိတာဘဲ . .ရှက်မနေပါနဲ့ . .)
ကိုတိုးကြီး က မိုနာ့ နို့သီးလေးတွေသာမက လဲ နို့တခုလုံးကိုလဲ ခပ်ဖွဖွ ဆုတ်နယ်ပေးနေသည် ။ မိုနာလဲ ကိုတိုးကြီး ရဲ့ နားနားကို ကပ်ပြီး တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သည် . .။
( စောက်ပတ် . .စောက်ပတ်မှာ ဖြစ်နေတယ် . .)
( ဘာဖြစ်နေလဲ မိုနာ . .)
( ယားတယ်..အရမ်း..ယားနေတယ် . .)
( စိုရောစိုလား . .)
( အင်း . .တအား..စိုနေတယ်. .)
( သက်သာအောင် အကို လုပ်ပေးရမလား . .)
( အကို က ဘယ်လို လုပ်မှာလဲ လို့ . .)
( အကိုနမ်းပေးမယ်လေ . .)
( ရှက်စရာကြီး . .အကို .မိုနာရှက်တယ် . .)
( မရှက်နဲ့ ..မှောင်နေတာဘဲ..နောက်ပြီး ဒို့ ၂ယောက်ထဲ . .)
( အကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောနဲ့နော် . .)
( အင်း . .မပြောဘူး . .)
ကိုတိုးကြီးလဲ ကာမစိတ် ..အရမ်းကြွနေပြီ ဖြစ်တဲ့ မိုနာ့ကို ဆိုဖါပေါ်လှဲချလိုက်ပြီး .နဂိုထဲက လျော့ရဲရဲဖြစ်နေတဲ့ အိမ်နေရင်း၀တ်ထမိန်လေးကို..ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး..ပေါင်ဖြူဖြူနှစ်ချောင်းကြားကို ခေါင်း ထိုးသွင်းလိုက် သည် . .။ မိုနာ့ စောက်ဖုတ် သည် အရေတွေ တအားစိုရွှဲနေသည် . .။ကိုတိုးကြီး ရတဲ့အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံဘူး . .။ မိုနာ့ စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်း ကို ပထမဆုံး အောက်ကနေ အထက်ကို ပင့်ပြီး ကော်တင်ယက်လိုက် သည် . .။
( အ...အ....အာ...အကိုရယ်. . .အို...အကိုရယ်... .)
ကိုတိုးကြီး ရဲ့လျာက အပြားလိုက်ကြီး မိုနာ့ စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းနှစ်မွှာကြားကို ဖိပွတ် ယက်တင်ကာ လျာထိပ်က စောက်စိလေးကို ခလုပ်တိုက်သွားသည် . .။ မိုနာ . .တကိုယ်လုံး တုန်ခါသွားရ သည် ။ မျက်လုံးလေးမှေးစင်းကာ .. ခါးလေးကော့တက်သွားသည် .. ။ မိုနာ့ ခါးသိမ်သိမ်လေးကိုဘယ်လက် နဲ့ ဆွဲကိုင် ညာလက်က မိုနာ့ နို့တလုံးကို မမှီမကမ်း လှမ်းဆုတ်ကိုင်ပြီး ကိုတိုးကြီး ဆက်တိုက် အပေါ်အောက် စုံချီဆန်ချီ လျက်ပေးပါတော့ သည် . .။
( အ..အ...အ....အ....အို..အို....အို...အို..........အို. .........ဟင့်ဟင့် ...အကို . . .)
မိုနာမှာ . .စောက်ပတ်ယားတဲ့ ဝေဒနာကို ရရနေတာ ကြာပြီ . .။ ကိုတိုးကြီးနဲ့ သူမ အတူတူ ပူးပူးတွဲတွဲ အမြဲ သွားလာနေတဲ့ အချိန် . စိတ်တွေ အမြဲ နိုးကြွ ဖေါက်ပြန်ခဲ့ရတာ..အခုတော့ ကိုတိုးကြီး သည် သူမ ပေါင်ကြားထဲ ခေါင်းကြီး ရောက်နေပြီ .. ။ ယက်နေပြီ..။ ကိုတိုးကြီး သည် မိုနာ့ စောက်ပတ် က ဘာမှ မကောင်းတဲ့ အနံ့အသက်မရ ..။ ဆပ်ပြာနံ့ သင်းသင်းလေးသာ ရနေ သည် .. ။ မိုနာ့ ဆန္ဒတွေ ပြည့်၀သွား သည် . .။ မျက်လုံးကို စုံမှိတ်ခါ အကို့ အယက်ကို ခံပစ်နေသည် ..။ အကိုတိုးကြီး သည် တကယ် အယက်တော် သည် . .။ နောက်ကျရင် . .အကို့ကို ( ဘာဂျာတိုးကြီး ) လို့ စပြီးနောက်ပြီး .. ခေါ်ဦးမည် . .။
( အို . .အို့ . .ဟ...)
မိုနာ ထွန့်ထွန့်လူး သွားရ သည် . .။ကိုတိုးကြီး ရဲ့ လျာကြီးရဲ့ ထိပ်က မိုနာ့ .. စောက်ပတ်အတွင်း ထဲကို အတင်းတိုး၀င်ပြီး မွှေနှောက် လာလို့ပါ . .။
( ကောင်းလားဟင်..မိုနာ . .)
( အင်း..အင်း..ကောင်းတယ် . .သိပ်..သိပ်ကောင်းတယ် . .)
အရမ်းကောင်းနေတုံး ဗြုံးကနဲ အကို ရပ်လိုက်သည် ..။
( ဟင်..ဘာ...ဘာလို့ရပ်လိုက်တာလဲ . .)
ကောင်းနေဆဲ ရပ်လိုက်လို့ ဖီလင်ပျယ်သွားသည် ..။
ကိုတိုးကြီး သည် ဆိုဖါကြီးပေါ်က ဆင်းလိုက်သည်.. ။ ပက်လက်လေးလှဲနေတဲ့မိုနာ့ဘေးနားမှာ လာရပ်လိုက်ပြီး.. ကိုတိုးကြီး သည် ခါးက လုံချည်ကို ကွင်းလုံးပုံ ..ချွတ်ချပစ်လိုက် သည် . .။ ဟယ်တော့ . .မိုနာ..တုန်လှုပ်သွားသည် .. ။ ကိုတိုးကြီး ရဲ့ လီးတန်မဲမဲကြီးကို အနီးကပ် တွေ့မြင်လိုက်ရလို့ဘဲ . .။ ဒါ ...ပထမဆုံး..အကို့ လီးကို တွေ့ဘူးရတာပါ . .။ တအိမ်ထဲ နိးနီးစပ်စပ် နေကြတော့ . .အကိုလီးတောင်တာကိုတော့ ခဏခဏ မြင်ဘူးခဲ့ သည် .. ။ လုံချည်၀တ်ထားရက် လုံချည် အောက်က ထောင်ထတာကိုဘဲ .. မြင်ဘူးတာပါ . .။
( အကြီးကြီးဘဲ အကို . .)
ကိုတိုးကြီး က သူ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီး ကို မိုနာ့ မျက်နှာနား တိုးကပ်ပေးလိုက် သည် ..။ မိုနာသည် အပြာဇာတ်ကားတွေကို နယ်စပ်မှာနေကထဲက ကြည့်ဘူးသူ ဖြစ် သည် . .။ အကို ဘာလို့ သူ့ လီးကြီးသူမပါးစပ်နား .. တိုးကပ်ပေးသလဲ.. ဆိုတာ.သဘောပေါက်ပါသည်. .။ အကို သည် မိုနာ့ ကို လီးစုတ်စေချင်လို့ ဆိုတာ သိသည် . .။
( တခါမှ စုတ်ဖူးဘူး . .)
( စမ်းစုတ်ကြည့်မိုနာ . .အကို့ကို ကောင်းအောင် လုပ်ပေးချင်တယ်မှုတ်လားဟင် . .)
မိုနာ ခေါင်းလေးညှိမ့်သည် ..။
မိုနာသည် ကိုတိုးကြီး ရဲ့ လီးကြီးကို လက်ကလေးနဲ့ မရဲတရဲ ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည် . .။ ပြီးတော့ ပါးစပ် နဲ့ ဖမ်းငုံလိုက် သည် . .။ ပူနွေးနေတဲ့ လီးကြီးရဲ့ ဒစ်လုံးကားကားကြီး ကို အသာ .. စုတ်ကြည့်လိုက် သည် . .။
( အိုး . .အင်း . .စုတ်..စုတ်. .)
လီးကြီးထိပ် က လျံကျနေတဲ့ အရေကြည်တွေ က ငံကျိကျိ ..နဲ့ . ..။ ကိုတိုးကြီး က သူလိုချင်တဲ့ ပုံစံကို ပြောပြ သည် . .။ သင်ပေးသည် . .။ မိုနာ ပထမဆုံး လီးစုတ်ဘူးခြင်း ...။
( အင်းဟင်း . .ကောင်းတယ် . .ကောင်းတယ် . .စုတ်.. စုတ်. . .)
တချက်တချက် ..ပြွတ်ပြွတ် . .နဲ့ မြည် သည် . .။
ကိုတိုးကြီး အရမ်းကောင်းလာပြီး..မိုနာ့ကို သူ လိုးချင်တာကြောင့်..ပြီးလိုက်လို့..မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီး..စိတ်ကို ထိန်းနေဆဲ . .ချောက်ကနဲ အိမ်ထဲ တံခါးဖွင့်၀င်လာတဲ့ အသံကြားလိုက်ရတာကြောင့် .. မိုနာ့ ပါးစပ်ထဲ ရောက်နေတဲ့ သူ့ လီးတန်ကြီး ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ရသည် . .။
( ဟေ့..ဘယ်သူ ရှိကြလဲ . .မိုနာ . .ကိုတိုးကြီး . ..)
ဖူးဖူး ရဲ့ အသံ . .။ မိုနာ က အသံပြန်ပြုလိုက်သည် . .။
( ဖူးဖူး..ပြန်လာပြီလား . .မိုနာတို့ အောက်ထပ်မှာ . .. .)
( မိုနာ . .ငါ . .ကြက်သားကြော်တွေ ပါလာတယ် . .လာစား . .ကိုတိုးကြီးရော . .)
ကိုတိုးကြီး နဲ့ မိုနာ အ၀တ်အစားတွေ ပြန်၀တ်ကြ သည် . .။ ကိုတိုးကြီး သည် သူ့ ထမင်းစားချိန်မှာ ဆိုင်ကြီး ရဲ့ ခေါင်မိုးပေါ် မှာ ပါလာတာတွေ စားရင်း . .မနေ့ည က မိုနာ နဲ့ ညိစွန်းကြတာတွေ ကို ပြန်လည် မြင်ယောင်နေပြီး ဘောင်းဘီအောက်က လီးတန်ကြီး က မတ်မတ်တောင်နေသည် .. ။
အနောက်က လှမ်းပုတ်ပြီး ခေါ်လိုက်သံကြောင့် လန့်သွားသည် . .။ ဒေါ်အယ်နာ . .။
( ဟာ..အန္တီ. .)
( ကိုတိုး . .အန်တီ အရေးတကြီး ပြောစရာ ရှိလို့ . .)
ကိုတိုးကြီး ဒိတ်ကနဲ စိတ်ပူသွား သည် . .။ မိုနာ နဲ့ သူ့ အကြောင်းများ . .ဒေါ်အယ်နာသိသွားပြီလား ။သူ ဒေါ်အယ်နာ့ မျက်နှာကို အကဲခတ်လိုက် သည် . .။ ဒေါ်အယ်နာ က သူ့ လက်တဖက်ကို ဖမ်းဆုတ်ကိုင်လိုက်ပြီး . .
( ကိုတိုး . .အန်တီအကူအညီတခု လိုနေတယ်ကွာ.. ကူညီအုံး . . )
လို့ ပြောသည် . ..။
( အင်း..ပြောလေ..အန်တီ. .ဘာလိုလဲ . .)
( ဒီလို . .ကိုတိုးရာ ..အန်တီ့ ညီမ လင်မယားလေ . .ဖါးအံမှာ . .လေမုန်တိုင်းကြောင့်.. အိမ်ခေါင်မိုး လန်သွားတယ် တဲ့ . .အန်တီ့ဆီ စာရောက်တယ် . .အဲဒါ..အန်တီ.သူတို့ဆီကိုငွေပို့ချင်တယ် . .သိတဲ့ အတိုင်းဘဲ . .အန်တီ လဲ သမီးတွေ အတွက် အ၀တ်အစား ၀ယ်ခြမ်းပေးလိုက်တာ နဲ့ ငွေမပိုဘူး . .ကိုတိုး ခဏ လှည့်ပါအုံး . .)
( ရတယ်အန်တီ. .ဘယ်လောက် လိုလဲ . ..)
( ရှစ်ရာ . .)
( ရတယ်လေ . .အန်တီ ဘယ်တော့ လိုလဲ . .)
( as soon as possible ပေါ့ ကိုတိုး . . .)
( ဒီည ကျနော်တို့ အလုပ်က ပြန်ရင် ..ပေးမယ်လေ . .)
( ATM က ၃၀၀ အများဆုံး..ဘဲ ထုတ်လို့ ရတယ် ဆို . .)
( ကျနော် အိမ်မှာ သိမ်းထားတာ ရှိပါသေးတယ် . .)
( ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ကိုတိုးရယ် . .အားကိုးပါတယ် . .ကွာ . .)
ဒေါ်အယ်နာ က ကိုတိုးကြီး ကို ဖက်လိုက် သည် . .။ ကိုယ်ချင်းပူးကပ်သွားတာကြောင့်ကိုတိုးကြီး ရဲ့ ပေါင်ကြားက အတန်မာမာ တောင့်တောင့်ကြီး . .ဒေါ်အယ်နာ ရဲ့ပေါင်ကြားက ဆီးခုံကြီးကို ဖိကပ် ထောက်မိသွား သည် ..။ ကိုတိုးကြီးက လဲ သူမ ဖက်သလို ပြန်ဖက်လိုက်တော့ သူ့ လက်ဖဝါးတွေ က ဒေါ်အယ်နာ့ ဖင်အိအိကြီးတွေ ကို ကိုင်တွယ်မိရက်သားကြီး ဖြစ်သွား သည် . .။ အသားခပ်ပျော့ပျော့ အနက်ရောင် ဘောင်းဘီ ၀တ်ထားတဲ့ ဒေါ်အယ်နာ ရဲ့ ဖင်ကားကားကြီးတွေ ကို ကိုင်ထားမိတော့ သူ့ လီး က ဆတ်က?